Sawiro:- Munaasibad Lagu Xusayay Aas-aaska Puntland Oo ka dhacday dalka Germany – SBC
Sawiro:- Munaasibad Lagu Xusayay Aas-aaska Puntland Oo ka dhacday dalka Germany
Magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka ayaa waxaa habeenimadii 1-August ka dhacay Munaasibadii ugu baaxada waynayd ee sanadka 2015-ka ka dhacda qaarada Yurub, taasi oo kulmisay Jaaliyadaha Jarmalka, Austria, Holland iyo Swizerland, Munaasabadan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay Jaaliyada Puntland ee dalka Jarmalka (PDF Germany).
Munaasabada oo ka dhacayay goob aad u qurux badan ayaa waxaa ka soo qayb galay Safiir-xigeenka Dawlada Federaalka Soomaaliya Mudane Kulmiye, Wakiilo ka socda Jaaliyadaha Holland, Belgium, Swirland iyo Ausria, dadweyne aad u farabadan oo ka kala yimi daafaha Jarmalka.
Munaasibada ayaa waxaa Qur’aanka Kariimka ah ku furay Sheekh Cilmi Axmed Xasan, waxaa hadafka Munaasabada ka hadlay Gudiga Qabanqaabada Munaasabada oo magacooda ku hadlayay Maxamed C/laahi (Faraxaley) Jaaliyada Puntland ee Austria oo uu magacooda ku hadlayay Suldan Maxamed Yusuf, Jaaliyada Swireland oo soo wakiilatay Bashiir C/qaadir Xaashi (Bakayle) iyo Jaaliyada Holland oo uu matalayay Saciid yare.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay dhaliyarada Aqoonyahanka ah oo magacooda uu ku hadlayaa Boqor Mawliid , gunaanadkii Gudoomiyaha Jaaliyada PDF Germany Eng. Maxamed C/raxman Cali ayaa hadalka ku soo dhaweeyay Safiir-xigeenka Dawlada Federaalka Soomaaliya Mud. Kulmiye, xubnihii Munaasabada ka hadlay ayaa isku waafaqasanaa in aas aaskii Puntland mid horumar laa taaban karo u soo hooyay shacabka reer Puntland iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed.